ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: March 2010
အောက်က ပုံနှစ်ပုံမှာ အကြီးအကျယ် မှားယွင်းနေတဲ့ တူညီတဲ့ အမှားတခုစီပါတယ်။ မမှားသင့်တဲ့ အမှားပါ။ အပေါ်ပုံက စင်္ကာပူ Straitstimes သတင်းစာ အွန်လိုင်းမှာ မနေ့က ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ပုံဖြစ်ပြီး အောက်ပုံကတော့ ဧရာဝတီ အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းမှာ ဒီနေ့ ဖော်ပြထားတာပါ။ Print Screen ခလုတ်ကို သုံးပြီး သိမ်းထားလိုက်တဲ့ ပုံတွေပါ။ အသေးစိတ်မြင်ရအောင် ပုံပေါ်မှာ ကလစ်ခေါက်ပါ။
Posted by ကိုပေါ on Wednesday, March 24, 2010
Labels: general Comments: (16)
ဦးဉာဏ်ဝင်း၊ ဒေါက်တာသန်းငြိမ်း (ဘီဘီစီ အင်တာဗျူး)
(ကိုသားဆွေ စာရိုက်ပြီး အီးမေးလ်မှ တဆင့် ဖြန့်ဝေသော မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့ည ဘီဘီစီ အင်တာဗျူးကို ပြန်လည်ဖြန့်ဝေလိုက်ပါတယ်။ အသံဖိုင်ကို ဒီမှာ နားထောင်လို့ရပါတယ်။)
ဘီဘီစီ ၂၃၊ ၃၊ ၂၀၁၀ ညပိုင်း မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်မှ အသံလွှင့်ချက် ကဏ္ဍတခုကို စာဖြင့်ပြန်လည်းရေးသားပြီး
ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ရဲဘော်များ မိတ်ဆွေများအတွက် ဝေမျှလိုက်ပါသည်။
စောစောက အသိပေးထားတဲ့သတင်းကို ဦးစွာတင်ပြပေးပါဦးမယ်။
ဒီကနေ့မှာ အန်အယ်ဒီ ထိပ်တန်းရှေ့နေကြီးနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးဥာဏ်ဝင်းနဲ့ဦးကြည်ဝင်းဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအိမ်မှာ သွားရောက်တွေ့ဆုံကြပါတယ်။ ဒီအခါမှာ လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အန်အယ်ဒီပါတီ မှတ်ပုံတင်ရေး - မတင်ရေး ကိစ္စပေါ်မှာ အခြေခံပြီးတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သဘောထားကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရအောင် မေးကြည့်တဲ့အခါမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြောစကားကို ဦးဥာဏ်ဝင်းက အခုလို ရှင်းပြပါတယ်။
ဦးဥာဏ်ဝင်း။ ။ ဒေါ်စု ပြောတာက .. “ဒီလိုတရားမျှတမှုမရှိတဲ့ ဥပဒေ၊ တဖက်သတ်ရေးထားတဲ့ ဥပဒေတွေအရ မှတ်ပုံတင်ရမယ့်အလုပ်ကို သူဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး၊ မှတ်ပုံလည်းတင်ဖို့ ဆန္ဒမရှိဘူး၊” .. ဒီလိုပြောပါတယ်။ တဆက်တည်းပြောတာက .. “အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းနဲ့အညီ ဆုံးဖြတ် ဆောင်ရွက်သွားဖို့ လိုတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
ဒေါ်နီတာရင်ရင်မေ။ ။ ဒါဆိုလို့ရှိရင် ဒီ မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့မှာ ဒီမဲခွဲ ဆုံးဖြတ်ကြမယ်ဆိုတော့ .. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ ပါတီကနေ ထွက်သွားမယ် - မထွက်သွားဘူးဆိုတဲ့ အချက်ကိုရော ဘယ်လိုများပြောနိုင်မလဲရှင့်။
ဦးဥာဏ်ဝင်း။ ။ အခုပြဿနာမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါတီက ထွက်သွားမယ် - မထွက်သွားဘူးဆိုတဲ့ issue ကလည်း မပေါ် သေးပါဘူးဗျာ။ ကျနော်တော့ လုံးဝ စိုးစဉ်းမျှ မကြားပါဘူး။
ဒေါ်နီတာရင်ရင်မေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ရှင့် .. ဒါဆိုလို့ရှိရင် ဒီ မဲမခွဲချင်တဲ့ အသံတွေလည်းတချို့ အဖွဲ့ဝင်တွေဆီက ကြားနေရပါတယ်။ အဲတော့ တချို့ ကလည်း မဲခွဲလို့ရှိရင်လည်း ဒီ လျှိူ့ ဝှက်မဲပေးမယ့် ကိစ္စတို့ပေါ့နော် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မဲပေးမယ့်ကိစ္စတို့လည်း ရှိနေပါတယ်ရှင့်။ အဲတော့ ၂၉ ရက်နေ့မှာရော ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ ဖြစ်သွားနိုင်မလဲရှင့်။
ဦးဥာဏ်ဝင်း။ ။ အဲဒါတော့ ကျနော်လည်း မသိဘူးဗျ။ မဲခွဲရေး - မခွဲရေးဆိုတာ ဒီမိုကရေစီမှာ မဲခွဲတာ ထုံးစံပဲလေ။ အဲတော့ ထုံးစံကိုလက်မခံဘူးဆိုရင် ဒီမိုကရေစီကို လက်မခံဘူးသဘောဖြစ်မှာပေါ့။
ဒေါ်နီတာရင်ရင်မေ။ ။ ဟို .. ဆရာတို့အနေနဲ့ပေါ့နော် .. ဒီ .. ထောင်ထဲက ဒီ ဗဟိုကော်မတီဝင်တွေရဲ့သဘောထားကိုရော ရယူဖို့ ရှိပါသေးလားရှင်။
ဦးဥာဏ်ဝင်း။ ။ လက်တွေ့အခြေအနေအရ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။
ဒေါ်နီတာရင်ရင်မေ။ ။ နောက်ပြီးတော့ .. ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေထဲမှာ မှတ်ပုံမတင်လို့ရှိရင် ပါတီအဖျက်သိမ်းခံရမယ် ဆိုတဲ့ အချက်က ပါတယ်ရှင့်၊ ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ရော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆရာဦးဥာဏ်ဝင်းတို့ကို ဘာများပြောလိုက်ပါသေးလဲ။
ဦးဥာဏ်ဝင်း။ ။ သီးခြားပြောတာမရှိဘူး၊ ဒီလို မှတ်ပုံ မတင်ရင် ပျက်တယ် ဘာညာဆိုတာ ကျနော်တို့
“ဖျက်တာနဲ့ ပျက်စီးတာ မတူဘူးတဲ့။ NLD မပျက်စီးဖို့လိုတယ်” တဲ့။ အဲလိုမျိုးပြောပါတယ်။
ဒေါ်နီတာရင်ရင်မေ။ ။ အဲတော့ NLD မပျက်စီးဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ ဒီ message ကိုပေါ့နော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ message ကို ဆရာဦးဥာဏ်ဝင်းတို့အနေနဲ့ ဘယ်လို .. ဘာသာပြန်နိုင်မလဲရှင့်။
ဦးဥာဏ်ဝင်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့ .. ကျနော်တို့ပါတီ .. အဲဒီ ဥပဒေတွေကြောင့်ပျက်သွားလို့ရှိရင် အဲဒါ ပျက်စီးတာမဟုတ်ဘူး၊ ဖျက်ဆီးခံရတာ။ ပျက်စီးတယ်ဆိုတာ NLD ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းပြီး ပျက်စီးတာကိုပြောတာ။
ဒေါ်နီတာရင်ရင်မေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ ဒါဆိုလို့ရှိရင် မှတ်ပုံမတင်ပဲနဲ့ပါတီရပ်တည်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းရော စဉ်းစားထားပါသေးလား ရှင်။
ဦးဥာဏ်ဝင်း။ ။ ကျနော်တို့ပါတီရပ်တည်နိုင်မှုအတွက် မစဉ်းစားဘူး။ နိုင်ငံရေးစဉ်းစားတယ်။ နိုင်ငံရေးဆိုတာ ပါတီရှိမှမဟုတ်ဘူး၊ နိုင်ငံရေးကိုပါတီမရှိလည်း လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ အခြေခံကို ကျနော်တို့နားလည်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ဦးဥာဏ်ဝင်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သဘောထားအမြင်တွေကို ဘီဘီစီကို ရှင်းပြသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
တခါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်ကနေ အခုလို NLD ပါတီ မှတ်ပုံတင်ရေးပေါ်မှာ သူ့ရဲ့သဘောထားအမြင်ကို ဦးဥာဏ်ဝင်းကတဆင့်ပြောပြလိုက်ပြီ... ဆိုတော့ ဒီ .. ပါတီမှတ်ပုံတင်ရေးကို လိုလားသူတဦး ဖြစ်တဲ့ NLD ရွေးချယ်ခံ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာသန်းငြိမ်း ကိုလည်း ဆက်သွယ်လိုက်ပါတယ်။
ဒေါ်နီတာရင်ရင်မေ။ ။ ဒေါက်တာသန်းငြိမ်းတို့အနေနဲ့ ဒီ .. မှတ်ပုံတင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ သဘောထားကို သိအပြီးမှာ ဘယ်လိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြမှာပါလဲလို့ မေးကြည့်ပါတယ်ရှင်။
ဒေါက်တာသန်းငြိမ်း။ ။ ကျနော့်အမြင်ကတော့ ဒီလိုဗျ။ အများဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာက ဒီအဖွဲ့အစည်းတခုရဲ့ မူဝါဒတွေ .. ဘယ်လမ်းလိုက်မလဲ .. ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့။ အဲဒီလို မူဝါဒရွေးချယ်တဲ့နေရမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ အများဆန္ဒနဲ့ရွေးချယ်တဲ့လမ်းကိုလိုက်တယ်ဆိုတာ ဒါကတော့ မှန်ကန်ပါတယ် သဘာဝကျပါတယ်၊ သို့သော်လည်းပဲ ဒီနိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းတခု ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော် ကျနော်တို့ ရပ်တည်မယ် -မရပ်တည်ဘူးဆိုတာက ဒီအဖွဲ့အစည်းတခုအနေနဲ့ နိုင်ငံရေးဆက်လုပ်မယ် မလုပ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့ ဆန္ဒနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ ကျနော့်အမြင်ကတော့ ဒါက .. ကျနော်တို့ .. ဒီ .. အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ထင်တယ်လေ။ ဆိုတာက .. ဟို .. သူလုပ်ချင်တာနဲ့ မလုပ်ချင်တဲ့လူကို အတင်း လုပ်ရမယ်လို့ ပြောလို့မရသလို၊ ကိုယ်မလုပ်ချင်တာနဲ့ပဲ ကျန်တဲ့ လူတွေလည်း မလုပ်ရဘူးလို့ ဒီလို ကန့်သတ်လို့မရဘူးလို့ ကျနော်တော့ အဲလို ထင်တာပဲလေ။
ဒေါ်နီတာရင်ရင်မေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ အဲတော့ .. ဆရာ့အနေနဲ့ ဒီမဲနဲ့ဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချင်ပါသလဲရှင့်။
ဒေါက်တာသန်းငြိမ်း။ ။ ဒါက သူက တဦးချင်းရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့် လို့ ကျနော်က မြင်တယ်ဗျ။ ဒီ နိုင်ငံရေးဆိုတာ သူတို့အသင်းအဖွဲ့အနေနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့ လုပ်ချင်ရင်ပဲလည်း အဲဒီလုပ်ချင်တဲ့သူတွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးပဲဗျ။ မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲ မလုပ်ချင်တဲ့သူတွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးပဲ။ အဲဒီတော့ .. ဒါကတော့ .. ကျနော်ထင်တယ် ဒီမိုကရေစီနည်းနဲ့ များရာ ဆုံးဖြတ်တာမျိုးထက်ပေါ့ဗျာ ဒါက မိမိရဲ့ဆန္ဒပေါ့။
ဒေါ်နီတာရင်ရင်မေ။ ။ တဦးချင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတာကတော့ ဟုတ်ပါတယ် ဆရာ၊ ဒါပေမယ့် NLD ဟာ အများပိုင်တဲ့ ပါတီကြီးတခုဖြစ်တယ်လေ။ NLD ဆိုင်းဘုတ်အောက်မှာ မှတ်ပုံတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရော အများနဲ့ မဆိုင်နိုင်ဘူးလားရှင့်။
ဒေါက်တာသန်းငြိမ်း။ ။ ဒီမှာ မနေချင်တဲ့သူနဲ့တော့ မဆိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ။ ဒီမှာ ကျန်နေတယ်ဆိုတဲ့ လူတွေကလည်းပဲ သူက .. ဟို .. တစိမ်းတွေမှမဟုတ်ပဲ၊ အပြင်ကနေလာပြီးတော့ ဒီနာမည်ကိုလာယူတာမှ မဟုတ်ပဲ။ အစထဲက နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် ဒီထဲမှာ ၀င်ပြီးတော့ လုပ်နေတဲ့လူတွေပဲ၊ အဲတော့ သူတို့က .. ဒီ.. အဖွဲ့ရဲ့ ဆိုင်းဘုတ်၊ ဒီအဖွဲ့ရဲ့နာမည် ဒါနဲ့ သူတို့နဲ့ သက်ဆိုင်တာပေါ့ဗျ။ အဲတော့ ဒီထဲမှာ မနေချင်တဲ့လူက သူ့ဟာသူ မလုပ်ချင်လို့ထွက်သွားတာကို ကျနော်တို့က အတင်း မတားသလို၊ သူတို့ထွက်တာနဲ့ပဲ ဒီထဲက လူတွေက ..ဟလား .. ဆက်မလုပ်ရဘူးဆိုတာက .. ဒါကတော့ ခုနကျနော်ပြောတဲ့ တဦးချင်းရဲ့ ရပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးကို ဒါ နည်းနည်းကျော်နင်းတယ်လို့ ကျနော်တော့ မြင်တာပဲလေ။
ဒေါ်နီတာရင်ရင်မေ။ ။ ဒါဆိုလို့ရှိရင် .. ဒီ မှတ်ပုံ မတင်ချင်တဲ့ဘက်က ရပ်တည်တဲ့လူတွေက NLD အဖွဲ့ထဲကနေ ထွက်ပေးရမှာလားရှင့်။
ဒေါက်တာသန်းငြိမ်း။ ။ ဒါက မဟုတ်ဘူးလေ .. သူတို့နေချင်ရင်လည်း .. နေပေါ့ ..။ ကျနော်တို့က (အနည်းငယ် လှောင် ရယ်သံလေးဖြင့်) မပြောပါဘူး။ မှုတ်ဖူးလား .. သူတို့ထွက်ချင်လည်းထွက်ပေါ့ .. ဒါ သူတို့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲလေ။
ဒေါ်နီတာရင်ရင်မေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ရှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်ကတော့ ဒီ မတရားတဲ့ဥပဒေအောက်မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေကြောင့် မှတ်ပုံမတင်ရေးဘက်ကို သူ့ဘက်ကတော့ ရှင်းရှင်းပြောသွားပြီ၊ အဲဒီတော့ ဆရာတို့အနေနဲ့ ဒီမှတ်ပုံတင်ဖို့ ကိစ္စကို ဆက်ပြီးတော့ သွားမှာလားရှင့်။
ဒေါက်တာသန်းငြိမ်း။ ။ အဲ .. ဒါကတော့ ကျနော်တယောက်တည်းပြောလို့မရဘူးလေဗျာ၊ အဲ ကျန်တဲ့လူတွေနဲ့ကျနော်တို့လည်း တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရဦးမှာပေါ့။
ဒေါ်နီတာရင်ရင်မေ။ ။ ဒါဆိုလို့ရှိရင် ပါတီဟာ ပြိုကွဲသွားတဲ့အနေအထား ရောက်မသွားနိုင်ဘူးလားရှင့်။ အများက ဒါကိုပဲ စိုးရိမ်နေကြတာလေ။
ဒေါက်တာသန်းငြိမ်း။ ။ ပါတီမပြိုကွဲစေချင်လို့ ဒီ ပါတီကြီးကို .. ဟလား .. ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဆက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့က .. ဟလား .. နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ဗျာ အမျိုးမျိုး ကျနော်တို့ .. ဒီ .. စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံခဲ့ကြတဲ့ ဒီပါတီကြီးကို ဆက်ပြီးတော့ ရှိစေချင်လို့ ကျနော်တို့က ဒါကို ကျိုးစားနေတာပဲ။ နော် .. မတရားဘူးဆိုတာ ခုမှ မဟုတ်ပဲဗျာ .. စတည်းက မတရားခဲ့တာကို ကျနော်တို့ ရင်ဆိုင်ခဲ့တာပဲ။ အဲတော့ ဒီ မတရားမှုတွေကို ကျနော်တို့ ဆက်ပြီးတော့ .. ဟလား .. ရင်ဆိုင်သွားဖို့အတွက် ဒီအဖွဲ့အစည်းဟာ .. ဟလား .. ရှိအပ်တယ် .. အင်းအင်း .. လိုအပ်တယ်လို့ ကျနော်တို့ယုံကြည်လို့ ကျိုးစားခဲ့တာပဲ။ နော် .. ဒီပေါ်မှာ ဟာ .. သူမကြေနပ်လို့သွားတဲ့ဟာကို လည်းပဲ သူ့ရဲ့အခွင့်အရေးတရပ်အနေနဲ့ ကျနော်တို့က ဘယ်လိုမှ တားဆီးလို့မရဘူးလေ။ အဲဒါကို ကွဲတယ်ပဲ ပြောပြော ပဲ့တယ်ပဲပြောပြော ဒါကတော့ ကျနော်တို့ ရင်ဆိုင်ရမှာပေါ့။
ဒါကတော့ NLD ရွေးချယ်ခံ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာသန်းငြိမ်းက ရှင်းပြသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
------------ --------- --------- --------- --------- ------
FREE DAW AUNG SAN SUU KYI NOW!
Labels: sharing Comments: (4)
ရှင် လွတ်လာတဲ့ တနေ့၊ အပြင်လောကမှာ ပြန်လည်ရပ်တည်နိုင်ဖို့ ကျမကို မရှိမဖြစ် လိုအပ်လိမ့်မယ်။
ဒါဆို ကျမအနေနဲ့လည်း လောလောဆယ်မှာ ဆက်လက် အသက်ရှင်သန် ရပ်တည်နေဖို့လိုတယ် မဟုတ်လားကွယ်။
ဒါကြောင့် ဒီလို ရှင်သန်ရပ်တည်နေနိုင်ရေးသက်သက်အတွက် ဟိုလူရမ်းကားကို မချစ်ပေမယ့်လည်း ကျမ လူသိရှင်ကြား ကတိလက်မှတ်ထိုးပြီး လက်ထပ်လိုက်တော့မယ်။
လက်ထပ်ပြီး အိပ်ယာပေါ်မှာ ရောက်တဲ့အခါကျမှ သူ့ကို ကျမ တဖြည်းဖြည်းချင်း ချော့မော့ပြီး ပြောမယ်။ ရှင်လွတ်လာတဲ့တနေ့ ရှင်နဲ့ ကျမကို ပြန်လည်ပြီး ပေါင်းသင်းခွင့်ပေးဖို့ အကြောင်းကိုလေ။
သြော်….တကယ်တော့….. ဒါတွေအားလုံးဟာ ရှင့်အတွက်ပါ…. ရှင်ရယ်။
Posted by ကိုပေါ on Monday, March 22, 2010
Labels: general Comments: (8)
“ရာဇဝင်ထဲမှာ အောင့်ကို ထားရစ်ခဲ့”
ဆန့်ကျင်ဖက် အုပ်စုနှစ်ရပ်အကြား နိုင်ငံရေးအားစမ်းနေကြပြီဆိုရင် ဘယ်သူ့ဖက်က စပြီး သွေးကြောင်မလဲဆိုတာကို စောင့်ကြည့်လိုတဲ့အခါ “ဘယ်သူ စပြီး မျက်တောင်ခတ်မလဲ” (Who will blink first) ဆိုပြီး ပြောကြလေ့ရှိတယ်။
ဟော…. မြန်မာပြည်မှာလည်း နအဖ စစ်အစိုးရနဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အကြား နိုင်ငံရေးအားပြိုင်မှုကြီးတခု ဖြစ်နေပြီ။ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတွေ ထုတ်ပြန်လိုက်အပြီးမှာ အဖွဲ့ချုပ်နဲ့ နအဖ ဘယ်သူက အရင် မျက်တောင် စ ခတ်မလဲ။ အနှစ် ၂၀ လုံးလုံး စောင့်စားခဲ့ရတာ ဒီတချီမှာတော့ ကျားနဲ့ဆင် လယ်ပြင်မှာ တွေ့ကြပြီပေါ့။ ပွဲကြီးပွဲကောင်းပဲ ဆိုပြီး အများပြည်သူက ရင်တမမနဲ့ စောင့်စားကြည့်ရှုနေကြတယ်။ ပြည်သူတွေဟာ နအဖကို ရွံ့ရှာမုန်းတီးနေကြတဲ့အတွက် အဖွဲ့ချုပ်ဖက်မှာ ဝန်းရံဖို့ ထောက်ခံဖို့ ဟန်ပြင်နေကြတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ ဗြုန်းဆို အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌရာထူးကိုယူထားတဲ့ ဦးအောင်ရွှေနဲ့ စီအီးစီအဖွဲ့ဝင် ဦးခင်မောင်ဆွေတို့ဟာ မျက်တောင်ခတ်ရုံမက နအဖ အစိုးရကို အရွယ်လွန် ပြည့်တန်ဆာမက ဖောက်သည်မြှူဆွယ်သလို ညုတုတုနဲ့ ကြာပစ် ပြလိုက်ကြတယ်။ ပါးစပ်ကလည်း ပီယဝါစာ ချစ်ဖွယ်သော စကားလေးကို ပြောလိုက်သေးတယ်။
“ပါတီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို ပါတီက ထုတ်ရင် ထုတ်ရပစေ။ သားသားတို့ ပါတီ ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှာ မှတ်ပုံတင် တင်ချင်ပါတယ် ခင်ညာ။ ပါလီမန်ထဲကို သားသားတို့ ဝင်ပြီး အခြေခံဥပဒေကို ပြုပြင်နိုင်ရေးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲလည်း ဝင်ချင်ပါတယ် ခင်ညာ”…………တဲ့။
အင်း….ကြားရ၊ ကြားရ နားဝမှာ မချမ်းသာပါ့ကလား အရပ်ကတို့ရေ။ စစ်အစိုးရရဲ့ လမ်းပြမြေပုံကို အခုတော့လည်း အားတက်သရော ထောက်ခံနေကြပါပြီကောလား။ ဦးခင်မောင်ဆွေက ပြောသေးတယ်။ ဒါဟာ အာဏာရှင်ဆီမှာ ဒူးထောက်အညံ့ခံတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ မှန်ပါတယ်။ ဝမ်းလျားမှောက်ပြီး နအဖ ခြေဖမိုးကို လျှာနဲ့ လျက်ပေးရုံမျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ လုံးမှာ အဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ အနေနဲ့ လူထုကို တက်ကြွသော ဦးဆောင်မှု (Active leadership) မပေးနိုင်ခဲ့ပေမယ့် မူဝါဒပိုင်းမှာ (ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ရွှေ တချီတချီ ထဖောက်တာက လွဲလို့) ကြီးကြီးမားမား ဖောက်ပြန်မှုမရှိခဲ့ဘူး။ ဒါကြောင့် နောက်ဆုံး ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာစာတမ်းအထိ လူထုနဲ့ နိုင်ငံရေးအင်အားစုများဟာ အဖွဲ့ချုပ်ကို ဆက်လက်ဝန်းရံပေးခဲ့ကြတယ်။ ဆိုလိုတာက ညံ့တာကို သိပေမယ့် မှန်တဲ့ဖက်မှာ ရပ်ဖော်ရလို့ အားပေးနေကြသေးတယ်။
အခုတော့ ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာစာတမ်းပါ အချက်အလက်တွေထဲက တချက်ကလေးကိုမှ နအဖစစ်အစိုးရက မလိုက်လျောဘဲနဲ့ ကိုယ့်တံတွေးကိုယ်ပြန်မျိုပြီး နအဖ ချပေးတဲ့လမ်းအတိုင်း လျှောက်လှမ်းဘို့ ဟန်ပြင်နေပါပြီကော။ ဘယ်မှာလဲ နိုင်ငံရေးသိက္ခာ။ ဘယ်မှာလဲ ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ မူဝါဒ။
အဲဒီလို မှောက်ချီလှန်ချီ၊ ခုတမျိုး တော်ကြာတမျိုးလုပ်တတ်တာမျိုးကို ကျနော့်အမေရဲ့ စကားယူသုံးရရင်…“ဟဲ့…. ဗလောင်းဗလဲ ကိုလှော် နွားလဲ”။ ကိုလှော်က နွားပွဲစားပါ။ နွားပွဲစားမို့ နွားအမျိုးမျိုးလဲတာ ပြဿနာမရှိပေမယ့် ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ပါ့မယ်လို့ သန္နိဋ္ဌာန်ချထားသူတွေက ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ကို အာဏာရှင်စနစ်၊ အာဏာရှင်လမ်းကြောင်းပေါ်က လျှောက်လှမ်းဖို့ ပြင်နေရင်တော့ ပြဿနာက တော်တော်ကြီးတယ်။
မမျှော်လင့်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေ၊ မတော်တဆ ဖြစ်ရပ်တွေ၊ အနာရောဂါကျရောက်မှုတွေ၊ သေခြင်းတရား စတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေလို မဟုတ်ဘဲ လောကကြီးမှာ သိစိတ်နဲ့ ယှဉ်ပြီး ဆုံးဖြတ်ရတဲ့ အရာမှန်သမျှမှာ ရွေးချယ်စရာတွေ ရှိနေပါတယ်။ “တခြားရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိတော့ဘူး” (No choice) ဆိုတဲ့စကားဟာ လူတွေအနေနဲ့ မရွေးချယ်သင့်တဲ့အရာကို သူရဲဘောကြောင်စွာ ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာ ကိုယ့်ဘာသာ လိပ်ပြာမသန့်မှုကို ပြေရာပြေကြောင်း ထန်းလက်နဲ့ကာတဲ့ စကားဖြစ်ပါတယ်။ လောကကြီးမှာ သိစိတ်နဲ့ ယှဉ်ပြီး ဆုံးဖြတ်ရတဲ့အရာမှန်သမျှ ရွေးချယ်စရာ လမ်းတွေရှိပါတယ်။ ကိုယ်က လမ်းမှန်ကို ရွေးရဲသလား၊ မရွေးရဲဘူးလားဆိုတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ စာရိတ္တသတ္တိအပေါ်မှာပဲ မူတည်တယ်။ ကိုယ်တိုင်ချမှတ်တဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို စောင့်ထိန်းရဲသလား၊ မစောင့်ထိန်းရဲဘူးလားဆိုတဲ့ သတ္တိအပေါ်မှာ မူတည်တယ်။
ကောင်းပြီ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ပါတီမှတ်ပုံမတင်ဘူး၊ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်ဘူးဆိုရင် အဖျက်ခံရမယ်။ အဲဒီလမ်းကို ရွေးရဲသလား။ အဲဒီလမ်းကို ရွေးရင် ဘာဖြစ်လဲ။ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ။
ပြီးခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ လုံးလုံးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကျယ်ချုပ်လွတ်လာတဲ့အချိန်ကလွဲရင် ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာ လူထုကို စည်းရုံးတာလည်းမလုပ်။ အဖွဲ့ဝင်သစ်တွေကို ချဲ့ထွင် စည်းရုံးတာလည်းမလုပ်။ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးခွဲအသစ်တွေ ထပ်မံဖွင့်လှစ်တာလည်းမလုပ်။ (မလုပ်ရုံမက နအဖက အဖွဲ့ချုပ်မြို့နယ်ရုံးခွဲတွေ ပိတ်ပစ်တာကိုတောင် ခေါင်းငုံ့ခံနေလိုက်သေးတယ်။) အဲဒီလို ဘာဆိုဘာမှ မလုပ်ဘဲ ပါတီတရားဝင်ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက်ဆိုပြီး နအဖ ကန့်သတ်မှုအမျိုးမျိုးအောက်မှာ နလပိန်းတုံးကြီးလို နေလာခဲ့တယ်။ ဦးဝင်းတင်စကားနဲ့ပြောရရင် ပါတီရှိနေပေမယ့် နိုင်ငံရေး ရှိမနေဘူး။ နိုင်ငံရေး သေနေတယ်။
နောက်တခုက ပါတီမရှိရင် ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့လညိး ဆရာလူထုစိန်ဝင်း ရှင်းပြထားတဲ့အတိုင်းပါဘဲ။ ၁၉၈၈ (ရှစ်လေးလုံး) လူထုဆန္ဒပြပွဲကြီး ဖြစ်လာတဲ့အချိန်အထိ အင်အယ်လ်ဒီ(အဖွဲ့ချုပ်) ဆိုတာ ရှိတောင်မရှိသေးဘူး။ ဒီတော့ ပါတီမရှိလည်း နိုင်ငံရေးရှိရင် အလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ သာဓက အထင်အရှားရှိတယ်။
ဒါက တရားဝင် ပါတီအဖြစ် ရပ်တည်ခြင်း မရပ်တည်ခြင်းဟာ ပဓာန မကျပုံ၊ နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေလုပ်ဖို့ နိုင်ငံရေးကတော့ မရှိမဖြစ် ရှင်သန်နေဖို့ လိုပုံတို့ကို အကျဉ်းချုဉ်း ပြောပြတာပါ။
ပါတီမရှိတော့ရင် ဘာဆက်လုပ်မလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေရှိပါတယ်။ မေးခွန်းရှိရင် အဖြေရှိရမယ်။ အဲဒီမေးခွန်းတွေကို ဖြေဖို့ ပထမဦးဆုံး မေးခွန်းတခု ပြန်မေးရမယ်။ ကျနော်တို့ လိုချင်တာဘာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်း။ ကျနော်တို့ဟာ အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ ကျွန်ဘဝကို လိုချင်တာဆိုလို့ရှိရင် ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတာ ရှင်းသွားပြီ။ ဘာမှ လုပ်မနေနဲ့တော့။ နအဖ ချပေးတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းသာ အသာတကြည် လိုက်သွားပေတော့။ ကျွန်ဘဝရောက်ဖို့ အထူးတလည် အားထုတ်စရာ မလိုတော့ဘူး။ ငါတနေ့ ကျွန်ဖြစ်ကို ဖြစ်ရမယ် ဆိုပြီး သန္နိဋ္ဌာန်တွေ ဘာတွေချပြီး လုပ်နေစရာမလိုလောက်အောင် နအဖ စစ်အစိုးရရဲ့ လမ်းပြမြေပုံက ကူညီပါလိမ့်မယ်။
အဲ…. တကယ်လို့ ကျနော်တို့ လိုချင်တာက လွတ်လပ်မှုနဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ် ဆိုရင်တော့ လုပ်ရမယ့် အလုပ်တွေ ရှိနေတယ်။ လွတ်လပ်မှုတို့ ဒီမိုကရေစီစနစ်တို့ဆိုတာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ ပြဒါးတလမ်း သံတလမ်းဖြစ်တဲ့အတွက် လွတ်လပ်မှုကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်၊ ဒီမိုကရေစီကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်ရမယ်၊ ဖြိုဖျက်ရမယ်။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို မဆန့်ကျင်ဘဲ၊ မဖြိုဖျက်ဘဲ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လွတ်လပ်မှုကို ရယူချင်လို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။
ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုတာ လူအများကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်။ လူအများကို ကိုယ်စားပြုတဲ့စနစ်ပေါ်ပေါက်လာဖို့၊ အခြေတည်ခိုင်မြဲဖို့ဆိုတာ လူအများက အဲဒီစနစ်ကို လက်ခံသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။ နားလည်ကျင့်သုံးဖို့လိုတယ်။ ဒီတော့ ပြည်သူလူထုကို ဒီမိုကရေစီအကြောင်းနဲ့ သူတို့ကို ဒီစနစ်ကသာ ဘယ်လို အကျိုးရှိစေမယ့်အကြောင်းတွေကို သဘောပေါက်အောင် ပညာပေးစည်းရုံးဖို့လိုတယ်။
တဖက်က ကြည့်ပြန်တော့ အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာ အခုလို ပညာပေးစည်းရုံးမှုတွေ၊ လှုံ့ဆော်မှုတွေ လုပ်ဖို့ဆိုတာ အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ဖို့မလွယ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေဖက်မှာ အားသာချက် တခုရှိတယ်။ လူထုက စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ခါးခါးသီးသီးဖြစ်နေတယ်။ အထွေထွေ စားဝတ်နေရေး ကြပ်တည်းမှု၊ အခက်အခဲတွေနဲ့ မွန်းကြပ်နေတဲ့အလျောက် လူထုအုံကြွမှုဟာလည်း အချိန်မရွေး ထပ်မံဖြစ်ပွားလာဦးမှာ မုချပဲ။ တနည်းပြောရရင် လူထုဟာ စစ်အာဏာရှင်တွေဖက်မှာ မရှိဘူး။ ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေဖက်မှာသာ ရှိတယ်။ ဒီအချက်ကို ၁၉၉၀ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကလည်း ပြည်သူလူထုက ထင်ထင်ရှားရှား ပြသပြီးခဲ့ပြီ။
၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးမှာ ကိုယ့်ဖက်က ပြင်ဆင်မှု အားနည်းခဲ့တယ်။ ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာ နိုင်ငံနဲ့အဝှမ်း မြို့တိုင်း ရွာတိုင်းမှာ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ ကွန်ယက်တွေ လျှို့ဝှက်တည်ဆောက်ရမယ်။ ပြင်ဆင်ရမယ်။ လူထုအုံကြွမှုကို သူ့အလိုအလျောက် ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အထိ ထိုင်စောင့်နေမယ့်အစား လူထုကို နှိုးဆော်ရမယ်။ လှုံ့ဆော်ရမယ်။ ရှစ်ဆယ့်ရှစ်မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ကိုထင်ကျော်တို့၊ မစုစုနွေးတို့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ကျနော်တို့ အတုယူရမယ်။ လူထုအုံကြွမှုဖြစ်လာရင် အရှိန်မြှင့်နိုင်အောင်၊ စနစ်တကျ စုစည်းဆောင်ရွက်နိုင်အောင် ကွန်ယက်တွေကို အခုကတည်းက အသင့်ပြင်တည်ဆောက်ထားသင့်ပါတယ်။ အခုလည်း လုပ်တဲ့လူတွေ လုပ်နေကြပါတယ်။
နောက်တခုက အာဏာရှင်တွေကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ တုန့်ပြန်မှု ၂ မျိုးနှစ်စားရှိတယ်။ ပထမတခုက မတရားတဲ့ အမိန့်တွေ ဖိနှိပ်မှုတွေကို ဘာမှ ပြန်မပြောဘဲ ငြိမ်ခံတာမျိုး။ နောက်တခုက အကြမ်းဖက်မှုကို အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ တုန့်ပြန်တာမျိုး။ အဲဒီတုန့်ပြန်မှု နှစ်မျိုးနှစ်စားလုံးကို အာဏာရှင်တွေက လိုလားကြတယ်။
ဒါပေမယ့် အာဏာရှင်တွေ ကြောက်ရွံ့တဲ့ တုန့်ပြန်မှု တမျိုးရှိနေသေးတယ်။ အဲဒါက မတရားတဲ့ အမိန့်အာဏာမှန်သမျှကို မကြောက်မရွံ့ ဖီဆန်ခြင်းပဲ။ အဲဒီလို မကြောက်တရားလက်နက်ကို ကိုင်ဆွဲလာကြပြီဆိုရင် အာဏာရှင်တွေအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ အာဏာယန္တရားကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ ခဲယဉ်းတယ်။ ဦးဝင်းတင်ပြောတဲ့ မကြောက်တရားလက်နက်ကို ကိုင်ဆွဲကြဖို့ အချိန်ရောက်လာပြီ။
လောလောဆယ်မှာတော့ အဖွဲ့ချုပ်စီအီးစီက ဦးအောင်ရွှေနဲ့ ဦးခင်မောင်ဆွေတို့တတွေ နအဖရဲ့ လမ်းကြောင်းအတိုင်း သူတို့ဘာသာ လျှောက်ရင်လည်း လျှောက်စေတော့။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့အနေနဲ့ “ရာဇဝင်ဆိုးထဲမှာ အောင်နဲ့မောင် ကို ထားရစ်ခဲ့” ရုံပါပဲ။
(၁) စိတ်ကူးမယဉ်ကြဖို့ (အောင်ဒင်)
(၂) နိုင်ငံရေးအရ (မေငြိမ်း)
(၃) ဒေါ်မြင့်မြင့်အေး- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူ ရပ်တည်မယ်
(၄) လူထုစိန်ဝင်း၏ အမြင် - အန်အယ်လ်ဒီနှင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ
Posted by ကိုပေါ on Saturday, March 20, 2010
Labels: political post Comments: (30)
မြန်မာစကားမှာ ရွှေရည်စိမ် ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်။ အတုအယောင် ဆိုတဲ့ အနက်အဓိပ္ပါယ်ထွက်တယ်။ ဥပမာ…. ရွှေရည်စိမ်လက်ကောက် ဆိုပါတော့။ တကယ်ရွှေသားအတိနဲ့ လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘဲ ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်အောင် အပေါ်ယံမှာ ရွှေရောင်ထည့်ထားတဲ့သဘော။ ရွှေလက်ကောက်အစစ်လိုတော့ အဖိုးမထိုက်တန်ဘူး။
ရွှေလက်ကောက်အစစ် မဝယ်နိုင်ခင်စပ်ကြား လူမြင်ကောင်းရုံ ရှိူးထုတ်ချင်လို့ဖြစ်စေ၊ ခိုးသားဓားပြ လုယက်မှာ ပူပန်လို့ဖြစ်စေ၊ အလှသက်သက် ဝတ်ချင်လို့ဖြစ်စေ အဲဒီ ရွှေရည်စိမ် လက်ကောက်အတုကို အတုမှန်းသိသိနဲ့ ဝယ်ယူ ဝတ်ဆင်ကြရင်ဖြင့် ဝတ်ဆင်သူရဲ့ အလိုဆန္ဒအတိုင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးပြောစရာမရှိပါ။
သို့သော်…. အဲဒီ ရွှေရည်စိမ်လက်ကောက်ကို တကယ့်ရွှေလက်ကောက်ကြီးပါလို့ ညာရောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ ညာရောင်းတဲ့လူမှာ အပြစ်ရှိတယ်။ အတုကြီးမှန်းသိသိနဲ့ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်အောင် ကူညီပေးတဲ့ ပွဲစားမှာလည်း အပြစ်ရှိတယ်။ အတုကြီးမှန်းသိသိနဲ့ အစစ်ကြီးပါလို့ ဝိုင်းဝန်းကြော်ငြာပေးတဲ့သူတွေ၊ လေလံပွဲမှာ ဈေးပြိုင်ခေါ်ပြီး တန်ဘိုးမရှိတာကို တန်ဘိုးတက်လာအောင် လုပ်ပေးကြသူတွေ အားလုံးမှာလည်း အပြစ်ရှိတယ်။ အပြစ်ကတော့ လိမ်ညာလှည့်ဖြားမှုပေါ့။
ရွှေရည်စိမ်လက်ကောက်တခုကို မှားယွင်းဝယ်ယူမိလို့ အလွန်ဆုံး နစ်နာလှရင် ဝယ်သူကိုယ်တိုင်ရယ်၊ သူနဲ့ အကျိုးစီးပွားထိစပ်နေတဲ့ သူ့မိသားစု၊ ဆွေမျိုး၊ မိတ်သင်္ဂဟတွေလောက်သာ ထိခိုက်နစ်နာနိုင်မယ်။
ဒါပေမယ့် တမျိုးသားလုံး ၊တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ ချီပြီး ထိခိုက်နစ်နာစေနိုင်တဲ့ ရွှေရည်စိမ်တွေကိုလည်း ကြုံရတတ်တယ်။ မြန်မာ့သမိုင်းကို ပြန်ကြည့်ရင် ၁၉၄၃ ခုနှစ်မှာ ဖက်ဆစ်ဂျပန်တွေက မြန်မာပြည်ကို လွတ်လပ်ရေး ပေးတယ်။ အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာလည်း ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဘမော်၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အစရှိသဖြင့် မြန်မာ့ခေါင်းဆောင်တွေ ပါတဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ကို ဖွဲ့ပေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအနေနဲ့ တကယ့်လွတ်လပ်မှုအရသာကို မခံစားရတဲ့အပြင် ဖက်ဆစ်ရဲ့ ချုပ်ချယ်အနိုင်ကျင့် နှိပ်ကွပ်မှုအောက်မှာ ဒုက္ခပင်လယ်ဝေခဲ့ကြရတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီ ဖက်ဆစ်ဂျပန်ပေးတဲ့ လွတ်လပ်ရေးကို ရွှေရည်စိမ်လွတ်လပ်ရေးလို့ ခေါ်ဆိုခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီတုန်းကတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းခေါင်းဆောင်တဲ့ မြန်မာမျိုးချစ်တွေဟာ ဒီရွှေရည်စိမ်လွတ်လပ်ရေးကို မလိုလားတဲ့အလျောက် မဟာမိတ်တွေနဲ့ ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပြီး ဖက်ဆစ်ဂျပန်တွေကို မြန်မာ့မြေပေါ်က အောင်မြင်စွာမောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။
ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအနေနဲ့ ကံမကောင်း အကြောင်းမလှချင်တော့ အခု ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးကြီးပြီးလို့ နှစ်ပေါင်း ၆၅ လောက်ကြာတဲ့အခါ မြန်မာပြည်မှာ နအဖ ဆိုတဲ့ ဖက်ဆစ်လက်သစ်တမျိုး အုပ်ချုပ်မင်းမူတာကို ခံနေရပြန်တယ်။ ဒီဖက်ဆစ်ကတော့ တိုင်းတပါးကမဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်နိုင်ငံသားကပဲ ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်းအပေါ်မှာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ ရက်ရက်စက်စက် ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖက်ဆစ်ဂျပန်က ရွှေရည်စိမ်လွတ်လပ်ရေးကြေညာခဲ့သလိုပဲ အခုလည်း နအဖ စစ်အစိုးရက ရွှေရည်စိမ်ဒီမိုကရေစီကို ညာရောင်းဖို့ ကြိုးစားနေပြန်ပြီလေ။ အတုအယောင်လမ်းပြမြေပုံအရ အတုအယောင် အမျိုးသားညီလာခံကြီး ခေါ်ယူကျင်းပကာ သူတို့စိတ်တိုင်းကျ ရေးဆွဲထားခဲ့တဲ့ အတုအယောင် အခြေခံဥပဒေကြီး အတည်ဖြစ်လာစေဖို့ အတုအယောင် ရွေးကောက်ပွဲကြီးကို ကျင်းပတော့မယ်တဲ့။ ရွေးကောက်ပွဲကနေ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အတုအယောင်လွှတ်တော်ကြီးနဲ့ “စည်းကမ်းရှိသော ဒီမိုကရေစီ” ခေါ် အတုအယောင်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်တော့မယ် ဆိုပဲ။
ဒုစရိုက်မှုပေါင်းများစွာ၊ ရာဇဝတ်မှုပေါင်းများစွာ ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ နအဖဆိုတဲ့ ဒုစရိုက်ကောင်ဟာ သန်းခေါင်ထက်တော့ ညဉ့်မနက်ဆိုသလို သူ့ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက် ရွှေရည်စိမ်လက်ကောက်နဲ့တူတဲ့ အတုအယောင်ဒီမိုကရေစီကို ရွှေအစစ်ပါလို့ ညာရောင်းဖို့ ပြင်နေပြီ။
ဒီအရောင်းအဝယ်မှာ အကျိုးဆောင်ပွဲစားတွေရဲ့ ကဏ္ဍဟာ အရေးပါလာပြီ။ ပွဲစားဟာ ဒုစရိုက်သမားနဲ့ အလိုတူအလိုပါ ပူးပေါင်းပြီး ဒီလက်ကောက်ကို ရောင်းမထွက် ထွက်အောင် ကူညီလှည့်ဖြားမှာလား။ ဒါမှမဟုတ် ဝယ်သူဖက်ကနေ သမာသမတ်ရှိရှိ ရပ်တည်ပြီး ရွှေရည်စိမ်လက်ကောက်ပါလို့ အတိအလင်းကြေညာကာ အရောင်းအဝယ်ကို မပျက်ပျက်အောင် ဖျက်မှာလား။
ဒီလိမ်လည်မှုကြီးမှာ တနပ်စားဉာဏ်နဲ့ အလိုတူအလိုပါ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြသူများကတော့ နောင်မြန်မာ့သမိုင်းမှာ “အမျိုးသားသစ္စာဖောက် လူလိမ်လူကောက်”တွေအနေနဲ့ မှတ်တမ်းဝင်လိမ့်မယ်။
အဲဒီ ရွှေရည်စိမ်လက်ကောက်ကို ရွှေအစစ် ထင်လို့ တန်ဖိုးကြီးပေးပြီး ရိုးရိုးသားသား မှားယွင်းဝယ်မိကြရင်လည်း အဲဒီ ဝယ်ကြသူတွေရဲ့ မသိနားမလည်မှုအတွက်၊ အမြင်မကျယ်မှုအတွက် အကျိုးဆက်အနေနဲ့ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုကို မြန်မာတမျိုးသားလုံးက နှစ်ရှည်လများ ပေးဆပ်ကြရပေတော့မယ်။
ပူးတွဲဖတ်ရှုရန်။ ။ Divisions over Party Registration Surfacing in NLD
Posted by ကိုပေါ on Wednesday, March 17, 2010
Labels: political post Comments: (20)
ဦးဝင်းတင်၏ ရှစ်ဆယ်နှစ်ပြည့် စကားသဝဏ် (ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ ဘလော့ဂ်မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။)
Posted by ကိုပေါ on Friday, March 12, 2010
Labels: sharing Comments: (15)